“Ma ahan Messi ee waa aniga shaqsiga Guulaha gaarsiiyay Barcelona, waa inaad i raali galisaa.”.- Eto’o oo furka tuurtay – Gool FM
“Ma ahan Messi ee waa aniga shaqsiga Guulaha gaarsiiyay Barcelona, waa inaad i raali galisaa.”.- Eto’o oo furka tuurtay
Byare April 11, 2019
(Europe) 11 Abriil 2019. Dhaliyihii hore ee naadiga Barcelona Samuel Eto’o ayaa raali galin ka dalbaday macalinkii hore ee kooxdaasi Pep Guardiola kaddib markii uu sheegay inuu xaqiray isla markaana uu mudnaantiisa u weeciyay dhanka Lionel Messi.
Macalinka iminka ee Manchester City Guardiola ayaa noqday tababaraha camaaliqada Spain sanadkii ugu dambeeyay uu Eto’o ku qaato Barca.
38-jirka u dhashay Cameron ee iminka ka xamaasha horyaalka dalka Qatar ayaa u soo dhaqaaqay Barca 2004-tii iyadoona laga iibiyay naadiga Inter Milan sanadii 2009 heshiis uu qeyb ka ahaa Zlatan Ibrahimovic oo dhanka kale u wareegay.
Sanadkii ugu horreeyay uu Guardiola qabto xilka Barcelona wuxuu ku guuleystay saddexleey koobab ah, La Liga, Champions League iyo waliba Copa del Rey xilligaas uu Eto’o dhaliyay 36-gool 52-kulan uu ciyaaray.
Taa oo ka dhigan isku cel celis kulankiiba inuu dhaliyay 0.69 halka uu Lionel Messi dhaliyay 38-gool 51-kulan isku cel clis 0.74-kulankiiba
Eto’o ayaa sheeganaya inuu xiligaas kooxda ka ahaa xubin muhiim ah isagoona Guardiola ka codsaday inuu raali galiyo maadaama uu xaqiray.
“Waxaan Guardiola ku iri, “Waad i raali galin doontaa maxaa yeelay qofka guulaha u keena Barcelona waa aniga ee ma ahan Messi,”. Eto’o ayaa sidaa yiri mar uu u waramayay beIN SPORTS.
“Messi gadaal ayuu ka imanayaa waxaad waydiin kartaa Xavi iyo Iniesta iyo dhammaan ciyaartoyda kale ee waqtigaa.
“Aniga ayuu ahaa shaqsiga guulaha gaarsiiyay Barcelona, Guardiola wuxuu i waydiisan doonaa cafis.
140-taageerayaal oo la xiray inta aysanba bilaaban ciyaartii xalay ee Ajax iyo Juventus......+SAWIRRO
Manchester United oo hoggaaminaysa tartanka loogu jiro saxiixa Fernandes